घर छोड्दा पुरुष सुरेन्द्र कसरी महिला बनाइए ? २३ बर्ष पढाएकी शिक्षिका स्कुलबाटै पीडित ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
घर छोड्दा पुरुष सुरेन्द्र कसरी महिला बनाइए ? २३ बर्ष पढाएकी शिक्षिका स्कुलबाटै पीडित ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jul 04, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज चार सय औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. निजी विद्यालयमा २३ वर्ष सेवा– बुढेसकालमा थला पर्दा रित्तो हात !
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–८ मोरङकी तुलसा पोखरेल, जो वीर अस्पतालको शैयामा उपचाररत छन् । क्यान्सर रोगले थलिएकी उनको केही दिन अघि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा दायाँ खुट्टाको घुँडा भन्दा तलको भाग शल्यक्रिया गरेर फालिएको छ । लामो समयदेखि उपचार गर्दा सबै पैसा सकिएको छ । तर, उनको समस्या खुट्टा काटिएकोमा मात्रै होइन, त्यो भन्दा बढी मन दुखेको कुरा त अर्कै छ ।
२. कञ्चनपुरका एक युवकको भारतमा जबरजस्ती लिंग परिवर्तन गराइयो !
काठमाडौं । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लाका २४ वर्षीय सुरेन्द्र सिंह माल ४ वर्ष अघि भारत जाँदा युवक थिए । तर, केही दिन अघि घर फर्किदा उनको नाम प्रिया कौर मात्रै भएन उनी पूरै युवतीका रुपमा फर्किए । यो परिर्वतन परिवारका लागि मात्रै आश्चार्यजनक छैन, सुरेन्द्र आफै पनि पीडामा गुज्रिरहेका छन् ।
३. मध्य असारमा रसायनिक मल अभाव, मर्कामा किसान
झापा । गत कार्यक्रममा झापाबाट केदार दाहालले मध्य असारमा धानखेतीका लागि आवश्यक रसायनिक मलको कृतिम अभाव भएको गुनासो गरेका थिए । उनको गुनासोपछि हाम्रो टिमले फलोअप गर्दा जिल्लामा मल उपलब्ध गराउने कृषी सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टे«निङमा एक बोरा पनि डिएपी मल नरहेको पाइएको छ । जिल्लामा धान रोपाईका लागि पाँच हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ ।
४. अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको उपचारका लागि पाल्पाको रिब्दीकोट पुग्यो मन्त्रीसहितको विज्ञ टोली
पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट–१ जोगिथुमका अधिकांश परिवारमा विभिन्न कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपचार नपाएको विषयलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौं । योसँगै हामीले प्रदेश नम्वर ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालसँग लाईभ कुरा पनि गरेका थियौं । मन्त्री बरालले गाउँमा अनौठा रोगहरु बारे थाहा पाएपछि विज्ञ डक्टरको टिम उपचारका लागि गाउँमा पठाउने बताएका थिए ।